Raw Testosteron propionate vovony Mpanamboatra sy mpamatsy - Factory
Rano Testosteron Propionate vovoka (57-85-2)
Ny testosterone Propionate vovoka dia iray amin'ireo karazana testosterone esters. Io fanafody io dia steroid anabolika ary iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny fambolena. Ny tanjona dia ny hampitombo ny hery sy ny hery ny tazomoka. Ny Propionate testosterone dia fomban-doko fohy mifototra amin'ny solika mifototra amin'ny testosterone. Ny testosterone Propionate dia manakana ny sekretera gonadotropine amin'ny toeram-pitrandrahana ary manimba ny fatran'ny estrogen ao amin'ny ovy, ka mihena ny lanjan'ny estrogen endogen. Ankoatr'izany, io dokambarotra io dia manosika ny fitazonana ny toetra maha-lahy sy ny lahy ary voamarina amin'ny fanoloana testosterone ao amin'ny lahy hypogonadal.
Rano Testosteron Propionate vovoka (57-85-2) video
Rano Testosteron Propionate vovoka (57-85-2) Description
Ny testosterone roahin'ny Propionate dia vongan-tohatra fohy mifototra amin'ny solika mifototra amin'ny testosterone. Ny testosterone dia manakana ny sekretera gonadotropine amin'ny toeram-pitrandrahana ary manaparitaka ny fatran'ny estrôgika ao amin'ny ovy, ka mihena ny lanjan'ny estrogen endogen. Ankoatr'izany, io dokambarotra io dia manosika ny fitazonana ny toetra maha-lahy sy ny lahy ary voamarina amin'ny fanoloana testosterone ao amin'ny lahy hypogonadal.
Ny testosterone roapolo Rano voapoizina dia hita amin'ny olona izay nampiasa na naka ity zava-mahadomelina ity. Izy io dia esters of testosterone miaraka amin'ny fanoloana propionate amin'ny toerana 17-beta. Ny vokatry ny testosterone amin'ny olona sy ny vertebrate hafa dia miseho amin'ny fomba roa tena lehibe: amin'ny fampiatoana ny receptor androgen (mivantana na amin'ny DHT), ary amin'ny fiovan'ny estradiol ary ny fampiatoana ny mpitsindroka estrogen sasany. Ny testosterone (T) maimaim-poana dia entina mankany amin'ny cytoplasm misy sela lasibatra, izay ahafahana mifatotra amin'ny receptor androgen, na azo averina amin'ny 5 & alpha; -dihydrotestosterone (DHT) amin'ny enzyme cytoplasmika 5 & alpha; -reductase. Ny DHT dia mamehy kokoa ny mpandray ny androgen ary mihoatra noho ny T, ka ny herin'ny androgenic dia momba ny 2. Ny fe-potoana 5 ny an'ny T. Ny T-receptor na ny DHT-receptor complex dia mandrindra ny fiovana ara-drafitra izay mamela azy hiditra ao amin'ny afovoan'ny sela ary mifandray mivantana amin'ny fizotry ny nucleotide manokana ao amin'ny DNA chromosomal. Ireo faritra mifamatotra dia antsoina hoe hormones (HREs), ary manara-maso ny asan'ny transcriptionalin'ny fototarazo sasany, mamokatra ny vokatry ny androgen.
Toro-testosterona roapolo Propionate (57-85-2) Specifications
Product Name Tselatra Testosteron Propionate vovoka
Anarana simika Testosteron roque Propionate parfum;
Drug Class stereo ester
molekiolan'ny Formula C22H32O3
molekiolan'ny Wvalo 344.495 g / mol
mitsonika Point 244 hatramin'ny 252 ° F (NTP, 1992)
Water Solubility 1.48 mg / L (amin'ny 25 ° C)
Ny antsasaky ny biolojia tsy misy daty
Color fotsy fotsy na fotsy
na fotsy fotsy fotsy na fotsy
Solubility latsaky ny 1 mg / ml amin'ny 76.1 ° F (NTP, 1992)
Storage Temperature Toby temperature
Application Ny 1,3-dimethylbutylamine dia ampiasaina handinihana ny fampiharana ny hormone polymethacrylate tsy voatanisa ho toy ny dingana mipetraka ao amin'ny chromatographie mitana amin'ny UV detection.
Inona no atao hoe vovo-dronon'ny Propionate (Testosterone)? (57-85-2)?
Ny volo-tsondro testosterone propionate dia fihenan-dàlana mamoaka steroide anabolic miaraka amin'ny antsasaky ny androm-piainany. Io toetra io dia ahafahan'ilay mpampiasa mandroso tsingerin'ny 8-10 herinandro ho an'ny testosterone fohy raha toa ka mahatratra ny haavon'ny mari-pana ao amin'ny 2-4 herinandro ambony. Izany dia endri-steroid androstane synthetic avy amin'ny testosterone amin'ny endriny XIONXa propionate testosterone. Ny vokatra azo avy amin'ny testosterone propionate dia vokatra tena mahomby. Ny testosterone dia steroid mahery, ary ny ester propionate dia miteraka toe-javatra izay ahafahana mifehy tsara ny fiforonan'ny ra, ary ny fampiasana azy dia hampihena haingana ny fiforonan'ny ra ho an'ny mpampiasa. Izany no mahatonga ny vokatra malaza amin'ny atleta vehivavy.
Ahoana ny testosterone Row Propionate vovoka (57-85-2) asa
Ny firaketana Gene dia natomboka, izay niovaova ny fifandanjana azota tao amin'ny vatana. Ny habetsaky ny fitomboan'ny voan'ny tsindrona insuline dia mitombo ao amin'ny atiny sy ny hozany. Ny propionate koa dia miteraka ny fihanaky ny satelita ao amin'ny hozany, ka noho izany dia misy ny famerenana ny hozatra sy ny hyperplasia. Etsy andaniny, ny Estera rehetra dia manana hetsika mitovy ihany; Ny fahasamihafana lehibe dia mifantoka amin'ny asany sy ny fihetsikao.
Rojo Testosterone Propionate vovoka (57-85-2) Dosage
Ny doka iraisana amin'ny propionate testosterone dia 50-100mg isaky ny andro hafa. Ity dia manome endrika isan-kerinandro amin'ny 350mg-700mg. Ny Propionate dia matetika ampiasaina mandritra ny fehezan-teny, miaraka amin'ny steroid hafa tsy aromatisation toy ny winstrol na primobolan. Tena mahomby koa ny fampifandraisana ny propionate amin'ny tsy misy aromatising androgen toy ny trenbolone, izay mety hitondra fiheverana faran'izay mafy. Ny fampidirana andian-tsokosoko maro hafa amin'ny propionate dia ho hita fa miteraka vokatra hafa mifandray amin'ny androgen.
Rano Testosteron Propionate vovoka (57-85-2) soa
Fampandrosoana ny testosterone:
Ampitomboina sy hery ny hozatra
Manondrabe tavela, manatsara ny laza
Ampitomboina ny libido
Mampihena ny loza ateraky ny aretim-po sy ny voan'ny aretin'ny sela
Ny profôtion propionate Testosterone dia manana fohy fohy. Ity no testosterone ester. Noho izany, ny injections dia matetika atao ao anatin'ny iray andro na isan'andro. Raha ny marina dia ity no tena tsy fahampiana raha oharina amin'ny mpivady hafa efa ela.
Ny fanaporofoan'ny testosterone propionate dia manambara fa aorian'ny fanasaziana dia ho tsapanao avy hatrany ny tanjaka, dia mifandray amin'ny fitomboan'ny hormonina ao amin'ny vatana izany. Izany hoe, rehefa miseho ao amin'ny vatany ny zava-mahadomelina, dia mihena haingana ao amin'ny rà mandriaka izy, noho izany dia tsapan'ny taom-pamokarana voalohany. Manana plus sy minus io. Ny plus dia ny hoe aorian'ny tsy fahampian-tsakafo ianao dia mahatsapa hery entina, ary ny minus dia noho ny fisintonana ny fanafody haingana mandritra ny fotoana fohy. Tsy maintsy mametraka matetika (isan'andro na isan'andro) ianao.
Ho an'ny ankamaroan'ny atleta dia tsy mitazona ny rano ao amin'ny vatany ny zava-mahadomelina (na kely loatra izany), noho izany dia tsy miteraka haingana be ao amin'ny vatana be loatra (oh: 5-6 kg ao anatin'ny herinandro vitsivitsy) ity fitsaboana ity (propionate) fampitahana amin'ny esters hafa. Na izany aza, ny vokatra testosterone dia miteraka lanjany amin'ny lanjan'ny propionate dia avo lenta avoakan'ny hafa. Misy ihany koa ny fiantraikany sy ny fiheverany.
Ny vokany hafa amin'ny propionate testosterone raha oharina amin'ireo esters hafa dia ny fividianana testosterone propionate dia lafo kokoa. Ary satria ny zava-mahadomelina dia azo ampiasaina toy ny amin'ny famerenana ny hozatry ny hozatra, ary koa mandritra ny fanimbana ny tavy mavesatra, dia tsy mendrika ny hampihatra izany amin'ny lanjany (satria lafo izany, ary tokony hatao isan'andro ny injeniera, noho izany Tsy mahasoa ny lanja). Noho izany, ny ankabeazan'ireo atleta dia manandrana zava-mahadomelina hafa mifandray amin'ny masomboly, ary maniry ho an'ny tavy loatra.
Buy Testosterone Powder Propionate avy amin'ny Buyaas.com
Rao 1-Testosterone (Dihydroboldenone) vovoka (65-06-5)
Rano Sustanon 250 vovoka